[Thursday, February 21st, 13] :: Denmark: Dumarka ajinebiga oo ku nool caydha
RH Kobenhagen: Dumar badan oo ajinebi ah oo ka yimi dalal aan reer galbeedka ahayn ayaa si joogto ah ugu nool caawimada caydha.
24.000 qof ee qaadanayay caawimada caydha muddo ka badan tobankii sano oo 15 sano ee ugu danbeeyay ah, tiro ku dhow 6.000 waa dumar ajinebi ah, kuwaasoo u dhigma boqolkiiba 25. sidaas waxa muujiyay tirokoobyo ku soo baxay diiwaanka Dream-register ee wasaaradda shaqada, ayuu qoray wargayska Jyllands-Posten.
Dumarka ajinebiga ah ee ka yimi dalalka aan reer galbeedka ahayn ayaa ka kooban boqolkiiba 3,4 dadwaynaha, kuwaasoo da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 64 jir, waana kooxda ugu badan ee muddo dheer qaadata caawimada caydha.
Caddayn saboolnimeed iyo dayicitaan
Cilmibaadhayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa tirokoobyadan ku tilmaamay caddayn saboolnimeed oo la soo deristay nidaamka caawimada caydha.
- Caawimada caydha ayaa loogu talogalay in si kumeelgaadh ah loogu caawiyo qofka, laakiin maaha ujeedadiisu in qofku weligii ku noolaado nidaamkan, ayuu wargayska Jyllands-Posten ku yidhi borofisar cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Syddansk Universitet.
- Sidaas awgeed waxa si fudud loogu magacaabi karaa caddayn saboolnimeed, kol haddaynnu leenahay nidaam noocan ah oo barbar socda nidaamka hawlgabka xilliga hortii, ayuu yidhi.
Guddoomiye kuxigeenka ururka shaqobixiyayaasha, Erik Simonsen, ayaa qaba, inay dadkaas dayaceen degmooyinka iyo xarumaha shaqadu.
Wax baa ka qaldan nidaamka
Wasiirka shaqada Mette Frederiksen (S) ayaa ku raacsan, inuu qaldan yahay nidaamka caawimada caydha ee hadda jira, waxana ay ku ballanqaaday inay wax ka qabanayso dhibaatada.
- Marna ujeedadu ma ahayn, in dadku sannado dhan oo xidhiidhsan qaataan caawimada caydha, oo haddana waalidku xaaladdaas u sii gudbiyo carruurta, oo qoysas dhammi si joogto ah ugu tiirsanaadaan caawimada caydha, ayaa wasiirku ku tidhi wargayska Jyllands-Posten.
Tarjumaada: Axmed Diiriye